▷ Kedu otu m ga-esi mara ụdị nke laptọọpụ m? 9 ụzọ chọpụta
Otu esi ama ihe nlereanya nke laptọọpụ m
Knowmara ihe nlereanya nke laptọọpụ Ọ bụghị naanị na ọ bara uru inwe ike ịchọ ndị ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ ndị na-ahụ maka njikwa, ma ọ bụ ọ bụrụ na akụkụ ụfọdụ dakọtara ma ọ bụ na ọ kwadoghị. Ọ nwekwara ike ịbụ nnukwu ozi iji chọpụta ma ị nwere ike ịwụnye otu sistemụ arụmọrụ na kọmputa gị, budata akwụkwọ ntuziaka maka ụdị gị akọwapụtara, melite firmware, wdg.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị otu na-agụnye ihuenyo-e biri ebi na ikpe, mgbe ụfọdụ, ha na-agwụ na-eji, ma ọ bụ nanị adịghị agụnye ihe nlereanya.
Ụzọ 9 iji mara ihe nlereanya nke laptọọpụ gị
Enwere ọtụtụ ụzọ ka ị nwee ike ịlele ihe nlereanya nke laptọọpụ. Ndị kacha ewu ewu bụ:
Ebe ị ga-ahụ ya na kọmputa: na akara nke gụnyere na laptọọpụ ị nwekwara ike ịhụ ụdị, nọmba nsonazụ, wdg. N'ọtụtụ kọmpụta ọ dị na ala, a ga-amata ya dị ka "Aha Model".
Otu esi eme ya site na Windows: ị nwere ike ịga na Malite> Gbaa, ma ọ bụ jiri igodo Windows + R, pịnye okwu msinfo wee pịa ENTER ka ọ gbaa ọsọ. Ozugbo n'ime, ị nwere ike ịga na System Summary> Sistemụ SKU. Ị nwekwara ike ime ya site na Command Prompt ma ọ bụ CMD. Ozugbo n'ime njikwa ahụ, mebie iwu "wmic baseboard get product manufacturer version serialnumer" na-enweghị nhota okwu.
Otu esi eme ya na GNU / Linux: iji nwee ike ịmata ụdị laptọọpụ na nkesa gị, ị nwere ike ịnweta Terminal, ma site n'ebe ahụ ị nwere ike ịme iwu dị iche iche iji mara ya, dị ka lshw ma ọ bụ dmidecode. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịme iwu "sudo dmidecode | obere ”na-enweghị nkwuputa ma pịa ENTER. Nke ahụ ga-egosi gị nkọwa nke ika (Onye nrụpụta) na ihe nlereanya (Aha ngwaahịa).
Otu esi eme ya na macOS: na Mac ị nwere ike mfe ịhụ ihe nlereanya site na ịpị apple (na Apple logo) na-egosi na elu ekpe mmanya. Wee họrọ Banyere Mac a, nke bụ nhọrọ mbụ na menu nke na-apụta. N'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ ihe nlereanya, ozi ngwaike, na ọbụna ụdị nke sistemụ arụmọrụ.
Na ngwanrọ ndị ọzọ: enwere otutu ngwanrọ nke atọ iji mara ụdị kọmputa, dị ka hardinfo dị maka GNU / Linux, ma ọ bụ AIDA64 maka Windows. E nwekwara ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, na n'ime ha, a na-enwekarị nhọrọ na onye na-eweta ya na ihe nlereanya nke ngwá ọrụ. Ọ bụrụ na enweghị ngalaba a kapịrị ọnụ, ị nwere ike lelee ngalaba dị ka DMI ma ọ bụ na motherboard, ebe ọ bụ na a na-egosipụtakarị akara na ụdị nke onye nrụpụta ebe ahụ.
BIOS / UEFI- Mgbe ịmalitegharịa kọmputa gị ma ọ bụ gbanye ya, ị nwere ike ịnweta BIOS / UEFI. Akara ọ bụla nwere ike ịdị iche (dịka ọmụmaatụ: ụfọdụ tinye F2, Del, F1, Esc,…). N'ime ị nwere ike ịhụ ozi sistemu na ime na ihe nlereanya.
akwụkwọ ọnụahịa ndụmọdụ: Ọ bụrụ na ị ka nwere akwụkwọ ọnụahịa maka ịzụrụ laptọọpụ, ma ọ bụ email nke ha zigara gị maka nkwenye ma ọ bụrụ na ị mere ya online, mgbe ahụ ọ bụ ụzọ dị mma iji chọpụta nke bụ ụdị laptọọpụ.
Na-ele akwụkwọ ntuziaka: Ọ bụrụ na ị na-edebe CD / DVD na akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ ntuziaka mmalite ngwa ngwa nke na-abịa na laptọọpụ, ihe nlereanya ị nwere ga-abịakwa ebe ahụ.
Caja- Dịka ọzọ, laptọọpụ na-ejikarị igbe. Ụdị a kapịrị ọnụ na-abịakwa na igbe akụrụngwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụghị n'oge na-adịbeghị anya, ọ ga-abụ na ị naghị edebe igbe ahụ, ya mere a ga-eme ya site na ụzọ ndị gara aga.
Otu esi ama ihe nlereanya nke laptọọpụ gị dị ka ika si dị
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị nwere ụdị laptọọpụ ndị a ụdị ama ama, ị nwere ike ịlele ụdị ị nwere n'ụzọ dị mfe na ozugbo (ọ bụrụhaala na ị na-edobe sistemụ arụmọrụ mbụ nke bịara na kọmputa gị yana ngwa arụnyere mbụ):
HP- Ị nwere ike ịnwale ịhụ ma kọmputa gị na-enye gị ohere imeghe windo ozi sistemụ HP. Iji mee nke a, na ụfọdụ laptọọpụ ị nwere ike ịhụ ya site na ịpị igodo Fn na Esc n'otu oge.
Lenovo: ị nwere ike ịga ọwụwa anyanwụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, pịa Chọpụta Ngwaahịa ma ọ bụ Lelee Nkwado PC, a ga-achọpụtakwa ihe nlereanya ahụ na-akpaghị aka.
Asus: ị nwere ike ịnwale ịgba ọsọ DXDIAG na Windows gị. Nke ahụ ga-emepe mmemme ebe ị nwere ike ịlele ozi sistemụ, dị ka Model Sistemụ.
Acer: (lee usoro ọnụọgụgụ akọwara n'elu).
Dell- Kọmputa ndị a etinyegoro ngwa ngwa akpọrọ Dell SupportAssistant. Mepee ngwa a ebe ị nwere ike ịhụ ihe nlereanya na ihuenyo isi.
Toshiba: (lee usoro ọnụọgụgụ akọwara n'elu).
Samsung: (lee usoro ọnụọgụgụ akọwara n'elu).
Apple: (lee usoro ọnụọgụgụ akọwara n'elu).
ndị ọzọ: (lee usoro ọnụọgụgụ akọwara n'elu).
Otu esi amata ma enwere m ike ịgbasa ebe nchekwa RAM nke laptọọpụ m
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Nduzi » Otu esi ama ihe nlereanya nke laptọọpụ m